सोच र भाग्य परिचय - शब्द फाउण्डेसन
सोच र भाग्य परिचय
चिन्ता र डटनीको अध्याय
यो पहिलो अध्याय सोच र भाग्य पुस्तकले तपाईंलाई केही विषयहरू प्रस्तुत गर्‍यो। धेरैजसो विषय अनौंठो लाग्नेछ। तिनीहरू मध्ये केही चौंकाउने हुन सक्छ। तपाईं तिनीहरू सबै विचारशील विचार प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं सोच्ने कुरासँग परिचित हुनुभयो, र पुस्तक मार्फत सोच्नुहोस्, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि यो झण्डै स्पष्ट हुँदै जान्छ, र तपाईं जीवनको केही आधारभूत तर यहाँका रहस्यमय तथ्यहरूको समझ विकास गर्दै हुनुहुन्छ - र विशेष गरी तपाईंको बारेमा। ।
पुस्तकले जीवनको उद्देश्य बताउँछ। त्यो उद्देश्य केवल यहाँ या पछाडि खुशी पाउन मात्र होइन। न त यो कुनै व्यक्तिको प्राण "बचत" गर्नु हो। जीवनको वास्तविक उद्देश्य, उद्देश्य र दुबै दुवैलाई सन्तुष्ट पार्ने उद्देश्य यो हो: कि हामी प्रत्येकलाई क्रमिक रूपमा सचेत रहन सदैव उच्च डिग्री मा सचेत हुनेछ; त्यो हो, प्रकृतिको बारेमा सचेत, र प्रकृति भित्र र यसका र बाहिर। प्रकृति भनेको इन्द्रियको माध्यमबाट सचेत हुन सक्ने सबै कुरा हो।
पुस्तकले तपाईंलाई आफ्नो परिचय दिन्छ। यसले तपाईंको बारेमा सन्देश ल्याउँदछ: तपाईंको रहस्यमय आत्म जुन तपाईंको शरीरमा बास गर्दछ। हुनसक्छ तपाईले आफैंलाई सँधै आफ्नो शरीरको रुपमा पहिचान गर्नु भएको हुन्छ। र जब तपाईं आफैको बारेमा सोच्न प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईं आफ्नो शारीरिक संयन्त्रको सोच्नुहुन्छ। बानीको बलबाट तपाईंले आफ्नो शरीर "I" को रूपमा, "आफै" को रूपमा बोल्नुभयो। तपाईं "जब म जन्मनु भएको थियो", र "जब म मर्छु" जस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रयोग गर्न अभ्यस्त हुन्छ; र "मैले आफूलाई गिलासमा देखें," र "मैले आफैंलाई विश्राम गरें," "मैले आफूलाई काटे," र यस्तै, जब वास्तवमा यो तपाईको शरीर हो जुन तपाईं बोल्नुहुन्छ। तपाई के हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नको लागि तपाई आफैले र तपाईको बस्ने शरीरको बीचमा स्पष्ट भिन्नता देख्नै पर्छ। तपाईले "मेरो शरीर" भन्ने शव्द सजिलै प्रयोग गर्नुभयो भन्ने तथ्यले तपाईले भर्खरको उद्धृत गरेका कुनै पनि प्रयोग गर्नु भनेको तपाई पूरै अपरिचित नभएको भन्ने संकेत गर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण भिन्नता बनाउन।
तपाईलाई थाहा छ कि तपाईं आफ्नो शरीर होइनौं; तपाईलाई थाहा छ कि तपाईंको शरीर तपाई होइन। तपाईंले यो थाहा पाउनु भयो, जब तपाई यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ कि तपाईंको शरीर आज यो के फरक छ, बचपन मा, तपाइँ पहिले यो सजग भए। वर्षौंको दौडान तपाईं आफ्नो शरीरमा रहनुभएको छ तपाईं यो परिवर्तन भएको छ भनेर सजग भएको छ: यसको बचपन र किशोरावस्था र जवान भएर गुजारा, र यसको वर्तमान अवस्थामा, यो धेरै परिवर्तन भएको छ। र तपाईं आफ्नो शरीर परिपक्व भएको छ भनेर चिन्ता छ, संसारको आफ्नो दृष्टिकोण र जीवनको प्रति तपाईंको मनोवृत्तिमा क्रमशः परिवर्तनहरू छन्। तर यी परिवर्तनहरूमा तपाईले तपाईंलाई बिरुद्ध बनाउनुभएको छ: यो हो, तपाईं आफैलाई जागिर हुनुभएको छ जस्तै उस्तै आत्म, समान म, सबै समय। यस सरल सत्यमा तपाईंको प्रतिबिम्बले तपाईंलाई बुझ्न बाध्य तुल्याउँछ कि तपाइँ निश्चित रूपमा होइन र तपाईंको शरीर हुन सक्दैन। बरु, तपाईंको शरीर एक भौतिक जीव हो जुन तपाईं बस्नुहुन्छ; एक जीवित प्रकृति तंत्र हो कि तपाईं सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ; एक जना जान हो जुन तपाईं बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ, प्रशिक्षित र मास्टर गर्न।
तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको शरीर यस संसारमा कसरी आएको; तर तपाईं कसरी आफ्नो शरीर मा आए तपाईंलाई थाहा छैन। तपाईं यसमा जन्मनु भएको केही समय पछि सम्म आउनुभयो; एक बर्ष, सायद, वा धेरै वर्ष; तर यस तथ्यको तपाईंलाई थोरै वा केही थाहा छैन, किनभने तपाईंको शरीरको सम्झना तपाईंको शरीरमा आए पछि मात्र शुरू भयो। तपाईलाई त्यो सामग्रीको बारे थाहा छ जुन तपाईको सदा परिवर्तनशील शरीर बनाइएको छ; तर यो के हो तपाईं को हो थाहा छैन; तपाईं अझै आफ्नो शरीरमा के रूप मा सचेत छैनन्। तपाइँलाई त्यो नाम थाहा छ जसद्वारा तपाइँको शरीर अरूको शरीरसँग भिन्न छ; र यो तपाईंले आफ्नो नामको रूपमा सोच्न सिक्नु भयो। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, तपाईंले जान्नुपर्दछ, तपाई व्यक्तित्वको रूपमा को हुनुहुन्न, तर तपाई एक व्यक्तिको रूपमा के हुनुहुन्छ - आफैको बारेमा सचेत, तर आफैंमा सचेत हुनुहुन्न, एक अभिन्न पहिचान हो। तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँको शरीर जीवित छ, र तपाइँ यथोचित रूपमा अपेक्षा गर्नुहुन्छ कि यो मर्नेछ; किनकि यो तथ्य हो कि हरेक जीवित मानव शरीर समयमै मर्दछ। तपाईको शरीरको शुरुवात थियो, र यसको अन्त हुनेछ; र सुरुदेखि अन्तसम्म यो घटनाको, परिवर्तनको, समयको संसारको कानूनको अधीनमा छ। तपाईं, तथापि, तपाईंको शरीरलाई असर गर्ने कानूनको अधीनमा हुनुहुन्न। यद्यपि तपाईको शरीरले सामग्रीलाई परिवर्तन गर्दछ जुन तपाईले लगाउनु भएको पोशाकलाई भन्दा तपाईले बनाउनु हुन्छ, तपाईको पहिचान परिवर्तन हुँदैन। तपाईं जहिले पनि तपाईं समान हुनुहुन्छ।
जब तपाईं यी सत्यहरू विचार गर्नुहुन्छ कि तपाईलाई भेट्टाउन सक्नुहुनेछ, तथापि तपाईले प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्न कि तपाईं आफैलाई अन्त्यमा आउनुहुनेछ, तपाईं भन्दा पनि सोच्न सक्नुहुनेछ कि तपाईं आफैँको सुरुवात हुनुभयो। यो कारणले गर्दा तपाईंको पहिचान सुरुवात र अनन्त छ; वास्तविक म, तपाईंलाई आफैं महसुस गर्छु, अमर र निर्दोष छ, सधैं परिवर्तनको घटना, समयको मृत्यु भन्दा बाहिर। तर यो तपाईंको रहस्यमय पहिचान हो, तपाईं थाहा छैन।
जब तपाईं आफैलाई सोध्नु हुन्छ, "म के हुँ भनेर म कसरी जान्दछु?" तपाईको पहिचानको उपस्थितिको कारण अन्ततः तपाईलाई केही यस्तो उत्तर दिन सक्छ: "यो जे भए पनि म जान्दछु कि म कम्तिमा चेतन छु; म सचेत हुनुमा कम्तिमा सचेत छु।" र यस तथ्यलाई जारी राख्दै तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ: "यसकारण म होशियार छु कि म हुँ। म सचेत छु, तर मँ हुँ, म अरू हुँ भनेर पनि। यो स्पष्ट आईनेस र स्वार्थ जुन मैले स्पष्ट रूपमा महसुस गर्दछु - मेरो जीवनकालमा परिवर्तन हुँदैन, जहाँ म सचेत छु भन्ने सबै कुरा स्थिर परिवर्तनको स्थितिमा देखिन्छ। " यसबाट अगाडि बढ्न तपाईं यसो भन्न सक्नुहुन्छ: "मलाई यो रहस्यमय अपरिवर्तनीय के हो भनेर मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन; तर म सचेत छु कि यस मानव शरीरमा, जसको बारेमा म मेरो ब्यूँझने बेलामा सचेत छु, त्यहाँ केही कुरा छ जो सचेत छ; र चाहान्छ र सोच्छ, तर त्यो परिवर्तन हुँदैन; सचेत चीज जुन यस शरीरलाई चाहान्छ र कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्छ, तर स्पष्टतः शरीर होइन। स्पष्टतः यो सचेत कुरा जुनसुकै भए पनि म नै हुँ। "
यसकारण, सोचेर, तपाईं आफैलाई अब शरीरको नाम र निश्चित अन्य भ्रामक सुविधाहरू जस्तै, शरीरमा होशियार आत्मको रूपमा सम्मान गर्न आउनु हुन्छ। शरीरमा होशियार आत्म भनिन्छ, यस पुस्तकमा, कर-इन-शरीर। ढोका भित्रको विषय हो जुन पुस्तक विशेष गरी चिन्तित छ। यसैले तपाईले यो सहयोगी पाउनुहुनेछ, जस्तै कि तपाईंले पुस्तक पढ्नु भएको छ, आफैलाई कष्टयुक्त क्यानको रूपमा सोच्नु हुन्छ; एक मानव शरीर मा एक अमर हत्यारा को रूप मा आफूलाई हेर्न को लागी। जब तपाईं आफैंको रूपमा सोच्न सिक्नुहुन्छ, तपाईंको शरीरमा क्यान्सरको रूपमा, तपाईं आफैलाई र अरूको रहस्य बुझ्न महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुहुनेछ।
तपाईं आफ्नो शरीर, र प्रकृति को सबै भन्दा सजग हो, ह्यान्स को माध्यम ले। यो केवल आफ्नो शरीर को माध्यम ले हो कि तपाईं भौतिक संसारमा प्रकार्य गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईं सोचेर प्रकार्य गर्नुहुन्छ। तपाईंको सोच र तपाईंको इच्छाले तपाईंको सोचलाई प्रेरित गर्दछ। तपाईंको भावना र चाहना र शारीरिक क्रियाकलापमा अनौठो प्रकट देखिन्छ। शारीरिक क्रियाकलाप मात्र अभिव्यक्ति हो, बाह्यकरणको, तपाईंको भित्री गतिविधिको। तपाईंको शरीर आफ्नो इन्द्रको साथ साधन हो, मन्त्रिमण्डल, जुन तपाईंको भावना र इच्छाले भरिएको छ; यो तपाइँको व्यक्तिगत प्रकृति मेशिन हो।
तपाईंको इन्द्रिय जीवित प्राणीहरू हुन्; प्रकृति-पदार्थको अदृश्य इकाइहरू; यी शरीरहरू को लागी तपाइँको शरीर को सम्पूर्ण संरचना permeate बलहरु; तिनीहरू त्यस्ता संस्था हुन् जुन अविवेकी हुन, उनीहरूको कार्यहरूको रूपमा सचेत छन्। तपाईंको इन्द्रियहरूले केन्द्रहरू, प्रकृतिको वस्तुहरू र तपाईंले सञ्चालन गरिरहनुभएको मानव मेशिनको बीचमा छापहरूको ट्रान्समिटरको रूपमा सेवा गर्दछ। इन्द्रियहरू तपाईको दरबारमा प्रकृति को राजदूत हो। तपाईंको शरीर र इन्द्रियहरूको स्वैच्छिक कार्यको शक्ति छैन; तपाईले महसुस गर्न र कार्य गर्न सक्षम हुनुभएकोमा तपाइँको पञ्जा भन्दा बढि छैन। बरु, त्यो शक्ति तपाईं, अपरेटर, सचेत स्वयं, मूर्त कर्ता हो।
तपाईं बिना, कर्ता, मेसिनले केहि पनि गर्न सक्दैन। तपाईंको शरीरको अनैच्छिक गतिविधिहरू - निर्माण, मर्मतसम्भार, ऊतक मर्मत गर्ने काम, र यस्तै अन्य - व्यक्तिगत सास फेर्ने मेसिनले स्वचालित रूपमा चलाउँदछ किनकि यसले परिवर्तनको महान प्रकृति मेसिनको साथ संयोजनको रूपमा काम गर्दछ। तपाईको शरीरमा प्रकृतिको यस नियमित कार्यको निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको छ, यद्यपि तपाईको असंतुलित र अनियमित सोच द्वारा: कामलाई मार्ड गरीएको छ र डिग्रीलाई खारेज गरिएको छ कि तपाई विनाशकारी र असंतुलन शारीरिक तनाव पैदा गर्नुहुन्छ जुन तपाईको भावनाहरु र इच्छालाई बिना तपाईको कार्य गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। सचेत नियन्त्रण। तसर्थ, क्रम मा कि प्रकृति आफ्नो विचारहरु र भावनाहरु को हस्तक्षेप बिना तपाईको मेशीन को पुनः अनुदान गर्न को लागी अनुमति दिईन्छ, यो प्रदान गरिएको छ कि तपाईले समय - समय मा यसको छोडिदिनु पर्छ; तपाईंको शरीरमा प्रकृति प्रदान गर्दछ कि बन्धन जसले तपाईंलाई र इन्द्रियहरूलाई सँगै समाहित गर्दछ कहिलेकाँही आराम, आंशिक वा पूर्ण रूपमा। यो विश्राम वा इन्द्रियहरूलाई छोड्नु भनेको निन्द्रा हो।
जब तपाइँको शरीर सुत्दछन् तपाईं यसको सम्पर्कबाट बाहिर हुनुहुन्छ; निश्चित अर्थमा तपाईं यसबाट टाढा हुनुहुन्छ। तर प्रत्येक चोटि तपाईले आफ्नो शरीर ब्यूँताएपछि तपाई स्वयं तुरुन्त सजग हुनुहुनेछ स्वयम "म" भनेर कि तपाई आफ्नो शरीरलाई निद्रामा छोडनु भन्दा पहिले तपाई नै हुनुहुन्छ। तपाईंको शरीर, जागृत वा निदाएको, केहि कहिल्यै सचेत छैन, सँधै। जुन सचेत छ, जुन सोच्दछ, के तपाईं आफै हुनुहुन्छ, तपाईंको शरीरमा गर्ने कर्ता हो। यो स्पष्ट हुन्छ जब तपाइँ विचार गर्नुहुन्छ कि तपाइँ सोच्नुहुन्न जब तपाइँको शरीर सुतिरहेको बेलामा; कमसेकम, यदि तपाइँ निद्राको अवधिमा सोच्नुहुन्छ भने तपाइँलाई थाहा छैन वा याद छैन, जब तपाइँ तपाइँको शरीर इन्द्रियहरु जगाउनुहुन्छ, तपाइँ के सोचिरहनु भएको थियो।
निद्रा या त गहिरो छ वा सपना हो। गहिरो निन्द्रा त्यस्तो अवस्था हो जहाँ तपाईं आफैमा फर्कनुहुन्छ, र जसमा तपाईं इन्द्रियको सम्पर्कबाट बाहिर हुनुहुन्छ; यो राज्य हो जहाँ इन्द्रियहरूले काम गर्न छोडेको छ यसको परिणामस्वरूप तिनीहरू शक्तिबाट विच्छेदन भएको छ जुन उनीहरू द्वारा काम गर्छन्, कुन शक्ति तपाई, कर्ता हो। सपना आंशिक टुकडीको राज्य हो; राज्यमा जहाँ तपाईको इन्द्रिय प्रकृतिको बाहिरी वस्तुहरु बाट प्रकृतिमा भित्री रूपमा कार्य गर्न को लागी बदलिन्छ, जागृति को समयमा महसुस गरीएको वस्तुहरु को विषयहरु मा काम अभिनय। जब, गहिरो निन्द्राको अवधि पछि, तपाईं आफ्नो शरीरमा पुन: प्रवेश गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एकैचोटि इन्द्रियलाई जगाउँनुहुन्छ र तिनीहरूमार्फत फेरि तपाईंको मेसिनको बुद्धिमान अपरेटरको रूपमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ, कहिले सोच्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, र भावनाको रूपमा कार्य गर्नुहुन्छ। इच्छा जुन तपाईं हुनुहुन्छ। र आजीवन बानीबाट तपाईं तुरुन्तै आफूलाई र तपाईंको शरीरसँग आफैलाई पहिचान गर्नुहुन्छ: "म सुतिरहेकी छु," तपाईं भन्नुहुन्छ; "अब म जागा छु।"
तर तपाईंको शरीर र शरीरबाट बाहिर, वैकल्पिक रूपमा जागा र सुतेको दिनदिनै; जीवन र मृत्यु मार्फत, र मृत्यु पछि राज्यहरू मार्फत; र जीवन देखि जीवन को सबै आफ्नो जीवन को लागी - तपाइँको पहिचान र तपाइँको पहिचान को भावना कायम रहन्छ। तपाईंको पहिचान एकदम वास्तविक चीज हो, र तपाईंसँग सधैं एक उपस्थिति; तर यो यस्तो रहस्य हो जसलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। यद्यपि इन्द्रियहरूले यसलाई पक्रन सक्दैनन् तैपनि यसको उपस्थितिमा तपाईं सचेत हुनुहुन्छ। तपाईं यसलाई भावनाको रूपमा सचेत हुनुहुन्छ; तपाईंको पहिचानको अनुभूति छ; आई-नेसको भावना, स्वार्थको; तपाईलाई बिना प्रश्न वा तर्कसंगत महसुस गर्नुहोला कि तपाई भिन्न भिन्न आत्म हुनुहुन्छ जुन जीवन भर रहन्छ।
तपाईंको पहिचानको उपस्थितिको यो भावना धेरै निश्चित छ जुन तपाईं सोच्न सक्नुहुन्न कि तपाईं आफ्नो शरीरमा कहिल्यै आफैलाई भन्दा अन्य हुन सक्छ; तपाईं जान्दछन् कि तपाईं सधैं त्यहि नै हुनुहुन्छ, लगातार त्यही नै, एउटै क्यानर। जब तपाईं आफ्नो शरीर आराम गर्न र सुत्नु भएको छ तपाईं आफ्नो विचारमा आफ्नो शरीर को आराम र जाने गरिसके पछि तपाईंको पहिचान समाप्त हुनेछ। तपाईं पूर्णतया आशा गर्नुहुन्छ कि जब तपाईं फेरि आफ्नो शरीरमा होशियार हुनुभयो र यसलाई गतिविधिको नयाँ दिन सुरू गर्नुहुन्छ, तपाईं अझै पनि त्यहि नै हो, उस्तै आत्म, उस्तै क्यानर।
निद्राको रूपमा, त्यसैले मृत्यु संग। मृत्यु तर लामो समयसम्म निद्रा हुन्छ, यस मानव संसारबाट अस्थायी सेवानिवृत्ति। यदि मृत्युको क्षणमा तपाईं आत्म-भावनाको भावनालाई सजग हुनुहुन्छ भने आत्महत्याको बारेमा तपाईं एकै समयमा होशियार हुनुहुनेछ कि मृत्युको लामो निन्द्राले तपाईंको पहिचानको निरन्तरतालाई असर गर्नेछैन जुन तपाईंको रातो निद्रा भन्दा बढी यो असर गर्छ। । तपाईं महसुस गर्नुहुन्छ कि अज्ञात भविष्यको माध्यममा तपाई जारी राख्न जाँदै हुनुहुन्छ, जस्तै कि तपाईंले जीवन समाप्त गर्ने बित्तिकै दिन पछि जारी राख्नु भएको छ। यो आत्म, यो तपाईं, जो आफ्नो वर्तमान जीवन भर मा होशियार हो, एक नै आत्म हो, त्यहि तपाईं, त्यो पनि आफ्नो पूर्व जीवन को माध्यम ले जारी दिन को दिन को सजग हो।
यद्यपि तपाईंको लामो विगत अहिले तपाईंको रहस्य हो, यस जीवनको तुलनामा पृथ्वीमा तपाईंको अघिल्लो जीवन भन्दा ठूलो आश्चर्य छ। प्रत्येक बिहान तपाईंको निद्रा शरीरमा फर्किने रहस्य हो- तपाईबाट न-थाहा छ-जहाँ तपाईले यसलाई मार्फत नगर्नु हुन्छ-कसरी थाहा छैन-कसरी, र फेरि जन्म को यस दुनिया को सजग हुन सक्छ र मृत्यु र समय। तर यो धेरै पटक भएको छ, लामो समय सम्म यो प्राकृतिक हो, कि यो एक रहस्य जस्तो लागेन। यो एक साधारण घटना हो। यद्यपि यो वास्तवमा प्रत्येक पुन-अस्तित्वको सुरुमा जब तपाईं जान्नुहुने प्रक्रियाबाट कुनै फरक छैन, तपाईले तपाईंको लागि बनाइएका नयाँ निकायहरू स्वभाव, प्रशिक्षित र तपाईंको आमाबाबु वा अभिभावकहरूले तपाईंको नयाँ रूपमा तयार पारेका छन्। संसारमा बसोवास, एक व्यक्तित्वको रूपमा एक नयाँ मुखौटा।
एक व्यक्तित्व व्यक्ति, मास्क, जसको माध्यमबाट अभिनेता, कामदार बोल्छ। यो शरीर भन्दा बढी छ। एक व्यक्तित्व हुन मानव शरीर यसको क्यान्सरको उपस्थितिद्वारा जागृत हुनुपर्छ। जीवनको परिवर्तन-परिवर्तनमा नाटकमा क्यानरले एक व्यक्तित्व चलाउँछ र यसको माध्यमबाट कार्य गर्दछ र यसले यसको भाग खेल्छ। व्यक्तित्वको रूपमा व्यक्तिले आफूलाई व्यक्तित्वको रूपमा सोधे; त्यसो कि, मस्जिदले आफैंको भागको रूपमा आफूलाई सोच्दछ, र मुखमा मा सचेत अमर स्वरुपको रूपमा आफैलाई बिर्सन्छ।
पुन: अस्तित्व र गन्तव्यको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ, अन्यथा मानव स्वभाव र चरित्रमा भएको भिन्नताहरूको लागि उत्तर दिन असम्भव छ। यो जोड दिन कि जन्म र स्टेशनको असमानताहरू, धन र गरीबी, स्वास्थ्य र बिमारी, दुर्घटना वा संयोगको परिणाम कानुन र न्यायको प्रतिरोध हो। यसबाहेक, बौद्धिक गुण, प्रतिभा, आविष्कार, उपहार, संकाय, शक्ति, सद्गुण; वा, अज्ञानता, अयोग्यता, कमजोरी, ढिलो, कुटिल, र चरित्रको महानता वा सानोता, शारीरिक आनुवंशिकताबाट आएको रूपमा, ध्वनि भावना र कारणको विपरित हो। वंशानुगत शरीरसँग गर्नुपर्दछ; तर चरित्र व्यक्तिको सोचले बनेको हुन्छ। कानून र न्यायले यस जन्म र मृत्युको संसारमा शासन गर्दछ, अन्यथा यो आफ्नो पाठ्यक्रममा जारी राख्न सक्दैन; र कानून र न्याय मानव मामिलामा प्रबल। तर प्रभाव सधैं तुरुन्तै कारण अनुसरण गर्दैन। रोपाई फसल काट्ने बित्तिकै आउँदैन। त्यस्तै, एक कार्य वा विचारको नतीजा लामो बीचमा पनी पछि देखा पर्दैन। हामी बिचार समय र फसलको बीचमा जमीनमा के भइरहेको छ भनेर हामीले थाहा पाउनु भन्दा पनि विचार र कार्यको बीचमा के हुँदैछ हामी देख्न सक्दैनौं; तर मानव शरीरमा प्रत्येक आफैले आफ्नो कानूनलाई नियतिको रूपमा यसको सोचाइ र के गर्छ भनेर बनाउँदछ, यद्यपि यो कानून तोक्दा यो सचेत हुँदैन। र यो कहिले थाहा हुन्छ कि प्रिस्क्रिप्शन कहिले भरिनेछ, भाग्यको रूपमा, वर्तमानमा वा पृथ्वीमा भविष्यको जीवनमा।
एक दिन र जीवनकाल अनिवार्य रूपमा उस्तै हुन्छन्; तिनीहरू निरन्तर अस्तित्वको आवर्ती अवस्थाहरू हुन् जसमा कर्ता आफ्नो नियतको बाहिर काम गर्दछ र यसको मानव खातालाई जीवनसँग सन्तुलित गर्दछ। रात र मृत्यु पनि धेरै समान हुन्छन्: जब तपाई आफ्नो शरीरलाई आराम र सुत्न दिनको लागि चिप्लनुहुन्छ, तपाई मर्नु पर्ने बित्तिकै मिल्दछ जुन तपाई मर्नु भएको बेलामा जानुहुन्छ। तपाईंको रातको सपना, यसको अतिरिक्त, मृत्यु पछिको अवस्थासँग तुलना गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं नियमित रूपमा पार गर्नुहुन्छ: दुबै कर्ताको व्यक्तिपरक गतिविधिको चरणहरू हुन्; तपाईं दुबैमा तपाईंको उठ्ने विचारहरू र कार्यहरूमा बस्नुहुन्छ, तपाईंको इन्द्रियहरू अझै प्रकृतिमा काम गर्दैछन्, तर प्रकृतिको भित्री अवस्थामा। र रातको गहिरो निद्राको अवधि, जब इन्द्रियहरू काम गर्दैनन् - बिर्सिने अवस्था जसमा कुनै चीजको सम्झना हुँदैन - खाली अवधिसँग मेल खान्छ जुन तपाईं भौतिक संसारको दहलीजमा पर्खनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईं। शरीरको नयाँ शरीरमा इन्द्रियको साथ पुन: कनेक्ट गर्नुहोस्: शिशु शरीर वा बाल शरीर जुन तपाईंको लागि बनाइएको हो।
जब तपाइँ नयाँ जीवन सुरु गर्नुहुन्छ तपाईं धुप हुनुहुन्छ जस्तो, धुरीमा जस्तै। तपाईं महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईं एक फरक र निश्चित हुनुहुन्छ। आई-एनस वा स्वार्थको यो भावना शायद एक मात्र वास्तविक कुरा हो जुन तपाईं एकदम समयको लागि होशियार हुनुहुन्छ। सबै कुरा रहस्य हो। केही समयसम्म तपाईं बिग्रिएका छन्, सम्भवतया पनि असाध्यै, तपाईंको अजीब नयाँ शरीर र अपरिचित परिवेशले। तर जब तपाईं आफ्नो शरीर कसरी सञ्चालन गर्ने र यसको इन्द्र प्रयोग गर्नुहुने छ भने तपाइँ आफैले यसको पहिचान गर्न बिस्तारै प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं अन्य मानिसहरूको द्वारा प्रशिक्षित गर्दै हुनुहुन्छ कि महसुस गर्न तपाईंको शरीर आफै हो। तपाईं महसुस गर्न तयार हुनुहुन्छ कि तपाईं शरीर हुनुहुन्छ।
तदनुसार, तपाईं आफ्नो शरीर इन्द्रको नियन्त्रणमा अधिक र अधिक रूपमा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईं कम र कम चेतना हुनुहुने हो कि तपाईं स्वामित्व लिनुभएको शरीरबाट भिन्न हुनुहुन्छ। र तपाईं बचपनबाट बाहिर जानको रूपमा तपाईं व्यावहारिक रूपमा सबै चीजहरू जुन इन्द्रमा भ्रामक छैन, वा इन्द्रको शङ्कास्पद योग्यतासँग सम्पर्क गुमाउनु हुनेछ; तपाईं मानसिक रूपले भौतिक संसारमा जेल लगाउनुहुनेछ, केवल घटनाको चेतना मात्र हो, भ्रमको। यी परिस्थितिहरूमा तपाईं आफूलाई आवश्यक रूपमा आजीवन रहस्य हुनुहुन्छ।
एक ठूलो रहस्य तपाईंको वास्तविक आत्म हो - त्यो ठूलो स्व जुन तपाईको शरीरमा छैन; यस जन्म र मृत्युको संसारमा होइन; तर जुन, होसियारीपूर्वक स्थायी रूप को सर्वव्यापी क्षेत्र मा अमर, तपाइँ संग तपाइँको तपाइँको सबै जीवनकाल, तपाइँको निद्रा र मृत्यु को सबै अंतरालहरु मार्फत एक उपस्थिति हो।
मानिस संतुष्ट हुन्छ कि केहि के लिए आजीवन खोज वास्तविकता मा आफ्नो वास्तविक आत्म को लागी खोज हो; पहिचान, स्वार्थ र I-ness, जो प्रत्येक एक कम मधुरो सचेत छ, र महसुस र जान्न इच्छा। त्यसकारण वास्तविक आत्मलाई आत्म-ज्ञान, मानव खोजको वास्तविक तर अपरिचित लक्ष्यको रूपमा पहिचान गर्नुपर्दछ। यो स्थायित्व, पूर्णता, पूर्ति हो, जुन खोजिएको छ तर मानव सम्बन्ध र प्रयासमा कहिल्यै फेला पर्दैन। यसबाहेक, वास्तविक स्वयं एक सदाकालको परामर्शदाता र न्यायाधीश हो जसले हृदयमा विवेक र कर्तव्य, धार्मिकता र तर्कको रूपमा, कानून र न्यायको रूपमा बोल्छ - जस बिना मानिस जनावर भन्दा केही बढी हुन्छ।
त्यहाँ एक आत्म हो। यो त्रिभुवन स्वयं को हो, यस पुस्तक मा त्यहि भनिन्छ किनकि यो एक व्यक्ति ट्रिनिटी को एक अविवाहित इकाई हो: एक जानकार भाग, एक विचारक भाग को, र एक कलर भाग को। केवल अंश को एक अंश केवल जनावर निकाय मा प्रवेश गर्न सक्छन् र त्यो शरीर को मानव बनाउन सक्छ। त्यो घनिष्ठ भाग भनेको यहाँ क्यानर इन-शरीरको रूपमा छ। प्रत्येक मानवमा भ्रष्टाचारको क्यान्सर आफ्नै ट्र्युन स्वको अनावश्यक भाग हो, जुन अन्य ट्र्युन सेल्भको बीचको भिन्न इकाई हो। प्रत्येक त्रिभुवन स्वयं को विचारक र ज्ञात भाग अनन्त मा हो, पुण्य को दायरे, जो यो हाम्रो मानव संसार को जन्म र मृत्यु र समय को पार गर्दछ। ढोकामा भित्र शरीर इन्द्र र शरीर द्वारा नियन्त्रण गरिएको छ; यसैले यो कहिले काही विचारधारा र यसको ट्र्यून स्वयं को जानकार भागहरु को वास्तविकता को सजग रहन सक्षम छैन। यसले तिनीहरूलाई छुटेको छ; भित्री वस्तुहरू यसलाई अन्धा, मासुको कोइलाले यसलाई राख्छ। यो उद्देश्य फारम भन्दा बाहिर देख्नुहुन्न; यो आफैले माटो कोलबाट मुक्त गर्न डर लाग्छ, र एक्लै उभिएर। को embodied doer नै इच्छुक र अर्थमा illusions को आकर्षण dispel तयार प्रमाणित गर्दा यसको विचारक र knower सधैं यो आत्म-ज्ञान बाटो मा प्रकाश दिन तयार छन्। तर विचारधारा र जानकारको खोजीमा कडा क्यानर विदेश बाहिर देखिन्छ। परिचय, वा वास्तविक स्व, सधैं हरेक सभ्यता मा मानव प्राणी को सोचने को रहस्य हो।
प्लेटो, सम्भवतः सबैभन्दा प्रख्यात र ग्रीसका दार्शनिकहरूको प्रतिनिधि थिए, जसले आफ्ना अनुयायीहरूलाई आफ्नो दर्शनको स्कूल, एकेडेमीमा आज्ञा दिएका थिए: "आफैंलाई चिन्नुहोस्" - गोन्थी समुद्री। उनको लेखोटबाट यो देखिन्छ कि उनीसँग वास्तविक स्वयंको ज्ञान छ, यद्यपि उनले प्रयोग गरेका कुनै पनि शब्दहरू अंग्रेजीमा "आत्मा" भन्दा पर्याप्त पर्याप्तको रूपमा अनुवाद गरिएको छैन। प्लेटोले वास्तविक स्वयंको खोजीको बारेमा अनुसन्धान विधि प्रयोग गर्‍यो। उसको चरित्रको शोषणमा ठूलो कला छ; आफ्नो नाटकीय प्रभाव उत्पादन मा। उसको द्वंद्वात्मक तरीका सरल र गहन छ। मानसिक रूपमा अल्छी पाठक, जो सिक्नु भन्दा मनोरन्जन गर्न सकिन्छ, अधिकतया प्लेटोलाई गाह्रो लाग्नेछ। स्पष्टतः उसको द्वंद्वात्मक विधि भनेको दिमागलाई तालिम दिने, तर्कको पाठ्यक्रम अनुसरण गर्न सक्षम हुनु र सम्वादको प्रश्न र उत्तर बिर्सनु हुँदैन। अन्यथा तर्कमा पुगेको निष्कर्षलाई न्याय गर्न असक्षम हुनेछ। निस्सन्देह, प्लेटोले सिकारुलाई ज्ञानको ठूलो साथ प्रस्तुत गर्ने विचार गरेन। सम्भवतः उसले सोचविचार गरेर दिमागलाई अनुशासित गर्ने योजना गरेको थियो, ताकि आफ्नै सोचमा उनी ज्ञानवान हुनेछ र आफ्नो विषयको ज्ञानमा अग्रसर होस्। यो, सोराटिक विधि, बौद्धिक प्रश्न र उत्तरहरूको द्वंद्वात्मक प्रणाली हो जुन यदि पछ्याईन्छ भने निश्चित रूपमा सोच्न कसरी सिक्न मद्दत गर्दछ; र दिमागलाई प्रशिक्षणमा स्पष्टसँग सोच्नको लागि प्लेटोले अरू कुनै शिक्षकले भन्दा बढी गरेको हुन सक्छ। तर कुनै पनि लेखहरु हाम्रो लागी उहाँहरु सोच्न को लाग्छ, वा दिमाग के हो बताउँछ; वा वास्तविक स्वयं के हो, वा यो ज्ञानको लागि मार्ग। अर्कोलाई हेर्नु पर्छ।
भारतको पुरानो शिक्षाको सार कथन गरिएको छ: "त्यो तिमी हो" (टाट टीसम एएसआई)। यद्यपि "त्यो" के हो वा "तपाई" के हो भनेर शिक्षणले स्पष्ट पार्दैन; वा कुन तरिकामा "त्यो" र "तपाइँ" सम्बन्धित छ, वा कसरी ती पहिचान गर्न सकिन्छ। यद्यपि यी शब्दहरूको अर्थ छ भने तिनीहरूलाई बुझन सकिने सर्तहरूमा व्याख्या गरिनु पर्दछ। सम्पूर्ण भारतीय दर्शनको सार - प्रिन्सिपल स्कूलहरूको सामान्य दृष्टिकोण लिनु - यो देखिन्छ कि मानिसमा अमर चीज छ जुन सँधै संयुक्त वा विश्वव्यापी चीजको व्यक्तिगत अंश रहन्छ, धेरै खसाल। समुद्री पानी समुद्रको एक हिस्सा हो, वा चिंगारीको जस्तै यसको ज्वाला र यसको उत्पत्ति र अस्तित्व छ; र, यो बाहेक, यो व्यक्तिगत कुरा, यो मूर्त कर्ता - वा जसरी यसलाई प्रिन्सिपल स्कूलहरुमा भनियो, आत्मा वा पुरूषलाई - केवल ब्रह्माण्डको चीजबाट इन्द्रिय भ्रम, मायाको पर्दाबाट अलग गरिएको छ। , जसले मानवमा कर्तालाई आफैलाई अलग व्यक्तिको रूपमा सोच्न लगाउँदछ; जबकि, शिक्षकहरूले भने, 'ब्रह्माण्ड' भनिएको महान विश्वव्यापी चीज बाहेक त्यहाँ कुनै व्यक्तित्व छैन।
यस शिक्षाको अन्तर्गत यो पनि भनिएको छ कि ब्रह्माण्डको ब्रह्माण्डका मूर्त टुक्राहरू मानव अस्तित्व र संयोग कष्टको अधीनमा छन्, ती ब्रह्माण्डसँग उनीहरूको पहिचानको अचेतन छ। जन्म र मृत्युको चक्रमा बाध्य छ र प्रकृतिमा पुन: अवधारणा सम्म, लामो युग पछि, बिस्तार बिस्तृत ब्रह्माणमा सबै टुक्रा पुन: एकजुट हुनेछ। कारण वा आवश्यकता वा ब्राह्मणको यो कठिन र दर्दनाक प्रक्रियाबाट टुक्राहरू वा बूँदाहरू पार गरिरहनुको चाहना, तथापि, वर्णन गरिएको छैन। न त यो देखाइएको छ कि सम्भवतः पूर्ण विश्वव्यापी ब्राह्मण कसरी छ वा यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ; वा कसरी यसको कुनै पनि टुक्राहरूको फाइदा हुन्छ; वा कसरी प्रकृतिलाई फाइदा हुन्छ। मानव अस्तित्व को सम्पूर्ण कुरा बिन्दु वा कारण बिना बेकार परीक्षा हो जस्तो देखिन्छ।
जे होस्, एक तरिकाले सूचित गर्दछ जुन एक उचित योग्य व्यक्तिले, "अलगाव", वा "मुक्ति" खोज्ने वर्तमान मानसिक बन्धनबाट प्रकृतिसँग, वीर प्रयासले जन, वा प्रकृति भ्रमबाट टाढा जान सक्छ, र अगाडि बढ्न सक्छ प्रकृतिबाट सामान्य उम्कन। यो भनिन्छ, योगको अभ्यासबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुपर्दछ; योगको माध्यमबाट यो भनिएको छ, यो सोच यति अनुशासित हुन सक्छ कि आत्मा, पुरुष - मूर्त कर्ता - आफ्नो भावनाहरु र चाहनाहरुलाई दबाउन वा नष्ट गर्न सिक्छ, र यो भावना भ्रमहरु लाई भ्रमित गर्दछ जसमा यसको सोच लामो समयदेखि उलझेको छ। ; यसरी थप मानव अस्तित्वको आवश्यकताबाट स्वतन्त्र भएपछि अन्ततः यो ब्रह्माण्डमा पुन: अवशोषित हुन्छ।
यी सबैमा त्यहाँ सत्यको निहितताहरू छन्, र त्यसैले धेरै राम्रोको। योगीले वास्तवमा आफ्नो शरीर नियन्त्रण गर्न र आफ्ना भावनाहरू र इच्छाहरूलाई अनुशासनमा राख्न सिक्छन्। उसले आफ्नो इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सिक्न सक्दछ जहाँ उसले इच्छाको आधारमा अप्रशिक्षित मानवीय इन्द्रियहरूले साधारणतया बुझ्ने व्यक्तिलाई आन्तरिक वस्तुको अवस्थाबारे सचेत गराउन सक्छ र यसरी पत्ता लगाउन र प्रकृतिमा अवस्थित राज्यहरूसँग परिचित हुन सक्षम हुन सक्छ। अधिकांश मानिसका लागि रहस्य। उसले अझ प्रकृतिका केही शक्तिहरूमा उच्च पद प्राप्त गर्न सक्दछ। ती सबैले निस्सन्देह व्यक्तिलाई अनुशासनहीन कर्ताको ठूलो समूहबाट अलग राख्छ। यद्यपि योग प्रणालीले इन्द्रियको भ्रमबाट "स्वतन्त्र", वा "अलग" गर्न खोजेको छ, यो प्रस्ट देखिन्छ कि यसले वास्तवमा प्रकृतिको सीमाहरूभन्दा बाहिर कतै पुर्‍याउँदैन। यो दिमागको बारेमा गलतफहमीको कारण स्पष्ट रूपमा हो।
योगमा प्रशिक्षित दिमाग भावना-दिमाग, बुद्धि हो। यो शरीरको दिमागको रूपमा पछिल्ला पृष्ठहरूमा वर्णन गरिएको क्यान्सरको विशेष साधन हो, यहाँ दुई अन्य दिमागहरु बाट प्रतिष्ठित पहिले नै प्रतिष्ठित छैन: भावना र दिमाग को मन दिमाग। शरीर दिमाग भनेको एकमात्र माध्यम हो जसले गर्दा भ्रूण क्यानर यसको इन्द्रमार्फत काम गर्न सक्छ। शरीरको दिमागको काम इन्द्रमा कडा रूपमा सीमित छ, र यसैले सख्त प्रकृतिमा। यसको माध्यम ले मानव ब्रह्माण्ड को यसको नैतिक पहलू मा सजिलै संग हो: समय, संसार को भ्रम। यद्यपि, चेलाले आफ्नो बुद्धिलाई तेज पार्छ, यो एकै समयमा स्पष्ट छ कि उहाँ अझै पनि आफ्नो इन्द्रमा निर्भर रहेको छ, अझै पनि प्रकृतिमा उग्रिएको छ, मानव निकायहरुमा निरन्तर पुन: अवस्थित हुन आवश्यक छ। छोटो छ, तथापि एक क्यान्सरले शरीरको मेशिनको अपरेटरको रूपमा हुन सक्छ, यसले प्रकृतिबाट अलग वा स्वतन्त्रतालाई मुक्त गर्न सक्दैन, आफ्नै शरीर र दिमागलाई विचार गरेर, आफै वा यसको वास्तविक ज्ञान पाउन सक्दैन; यस्ता विषयहरूका लागि कहिल्यै रहस्यमा रहस्यहरू छन्, र केवल मन र भावनाको दिमागमा शरीर-दिमागको सही समन्वय कार्यको माध्यमबाट मात्र बुझ्न सकिन्छ।
यस्तो लाग्दैन कि पूर्वीय सोच प्रणालीहरूमा भावना र इच्छाको दिमागलाई ध्यानमा राखिएको छ। यसको प्रमाण पतञ्जलिको योगका चार पुस्तकहरु र त्यो पुरानो कार्यको बिभिन्न भाष्यमा पाउन सकिन्छ। पतञ्जलि सम्भवतः भारतका दार्शनिकहरूको सबैभन्दा सम्मानित र प्रतिनिधि हुन्। उनका लेखकहरु गहन छन्। तर यो सम्भाव्य देखिन्छ कि उसको वास्तविक शिक्षा या त हराएको छ वा गोप्य राखिएको छ; नाजुक सूक्ष्म सूत्रहरूको लागि कि उहाँको नाम वहन गर्न वा असम्भव बनाउन को लागी उन्को उद्देश्य को लागी गरीरहेको छ जसको लागी उनी उद्देश्य राखिएको हो। शताब्दीयौंदेखि यस्तो विरोधाभास कसरी निस्सन्देह रहन सक्छ भन्ने कुरा यसमा र पछि मानव अनुहारमा व्यक्त गर्ने भावना र चाहनाको सम्बन्धमा अध्यायमा राखिएको कुराको प्रकाशमा मात्र वर्णन गर्न सकिन्छ।
पूर्वी दर्शनहरू जस्तै अन्य दर्शनहरू पनि मानव शरीरमा सचेत आत्मको रहस्य, र त्यो शरीर र प्रकृति, र समग्रमा ब्रह्माण्डको सम्बन्धको रहस्यसँग सम्बन्धित छ। तर भारतीय शिक्षकहरूले उनीहरूलाई यो थाहा छ कि सचेत आत्म - आत्मा, पुरुष, मूर्त कर्तव्य, प्रकृतिबाट यत्तिकै भिन्न रहेको छ भनेर देखाउँदैन: शरीरमा गर्ने र शरीरका बीच कुनै स्पष्ट भिन्नता छुट्याइएको छैन। शरीर जुन प्रकृतिको हो। यो भिन्नता देख्न वा दर्साउन असफलता स्पष्टतः विश्वव्यापी गलत धारणा वा भावना र इच्छाको गलतफहमीका कारण हो। यो आवश्यक छ कि भावना र इच्छा यस बिन्दु मा व्याख्या गरिएको छ।
भावना र इच्छाको विचारले यो पुस्तकमा राखिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र टाढाको विषय मध्ये एक को परिचय दिन्छ। यसको महत्त्व र मूल्य अति नैतिक हुन सक्दैन। भावना र इच्छाको बुझाइ र प्रयोगको मतलब व्यक्ति र मानवताको प्रगतिमा मोटो मोड हुन सक्छ; यसले झूटा सोच, झूटा विश्वासहरू, झूटा लक्ष्यहरू, जसले तिनीहरूलाई अन्धकारमा राखे। यसले झूटो धारणालाई निषेधित गर्दछ जुन लामो समयदेखि अन्धापूर्वक स्वीकार गरिएको छ; एक विश्वास छ कि अब यति धेरै मानिसहरु को सोच मा गहिरो जरा छ कि जाहिरा तौर मा कुनै पनि यसलाई पूछने को बारे मा सोचा छैन।
यो यो हो: सबैलाई विश्वास गर्न सिकाइएको छ कि शरीरको इन्द्रियहरू संख्यामा पाँच हुन्, र त्यो भावना इन्द्रियहरू मध्ये एक हो। इन्द्रियहरू यस पुस्तकमा भनिएझैं प्रकृतिको एकाइ हुन्, मौलिक प्राणीहरू, उनीहरूको कार्यको रूपमा सचेत छन् तर ज्ञानी छैनन्। केवल चार इन्द्रियहरू छन्: दृश्य, सुनुवाई, स्वाद, र गन्ध; र प्रत्येक अर्थको लागि त्यहाँ एक विशेष अंग छ; तर भावनाको लागि कुनै विशेष अ organ्ग छैन किनभने भावनाले शरीरमा महसुस गर्यो भने - शरीरको होइन, प्रकृतिको हो। यो कर्ताको दुई पक्ष मध्ये एक हो। जनावरहरु पनि भावना र इच्छा छ, तर जनावरहरु मानव बाट संशोधन हो, पछि वर्णन गरे।
उही इच्छा, कोयरको अर्को पक्षको बारेमा भनिएको हुनुपर्छ। महसुस र चाहना सधैं एकसाथ विचार गरिनुपर्दछ, किनकि तिनीहरू बेवास्ता हुन्छन्; नतिजा बिना नै रहन सक्छ; तिनीहरू बिजुलीको दुईवटा खण्ड जस्तै छन्, सिक्काको दुई पक्ष। यसैले यो किताबले कम्पाउन्ड शब्दको प्रयोग गर्दछ: भावना र इच्छा।
ढोकाको भावना-र-इच्छा बुद्धिमानी शक्ति हो जुन प्रकृति र इन्द्रहरू सारियो। यो रचनात्मक ऊर्जा भित्र छ जुन सबै ठाँउ उपस्थित छ; बिना यो सबै जीवन बन्द हुनेछ। इमान्दारी र अस्तित्वको शुरुवात र अनन्त रचनात्मक कला हो जुन सबै चीजहरू बुझ्दछन्, अवधारणा, गठन, ल्याइएकाहरू, र नियन्त्रण गरिएका हुन्छन्, चाहे मानव निकायहरूमा अयोग्य एजेन्सीहरू वा तिनीहरूका हुन् जो संसारका सरकार हुन्, वा महान बुद्धिमानीहरूको। भावना र इच्छा सबै बुद्धिमानी गतिविधि भित्र छ।
मानव शरीरमा, भावना र इच्छा सचेत शक्ति हो जुन यस व्यक्तिगत प्रकृति मेसिन संचालित गर्दछ। चार इन्द्रिय मध्ये एक पनि होईन - महसुस गर्छ। महसुस गर्ने, कर्ताको निष्क्रिय पक्ष भनेको त्यो हो जुन शरीरमा महसुस हुन्छ, जसले शरीरलाई महसुस गर्छ र शरीरलाई संवेदनाको रूपमा चार इन्द्रियहरूले सार्ने प्रभावहरू महसुस गर्दछ। यसबाहेक, यो फरक डिग्रीमा सुपरस्सेन्सररी प्रभावहरू बुझ्न सक्दछ, जस्तै मुड, वातावरण, एक पूर्वसूचना; यसले सही र के गलत लाई महसुस गर्न सक्छ, र यसले अन्तस्करणको चेतावनी महसुस गर्न सक्छ। इच्छा, सक्रिय पक्ष, सचेत शक्ति हो जसले शरीरको कर्ताको उद्देश्यको पूर्तिमा सार्दछ। कर्ता दुबै पक्षका दुवै पक्षहरूमा एकसाथ कार्य गर्दछ: यसैले प्रत्येक इच्छा भावनाबाट उत्पन्न हुन्छ, र प्रत्येक भावनाले इच्छालाई जन्म दिन्छ।
तपाईं शरीरमा चेतनाको ज्ञानको बारेमा महत्त्वपूर्ण कदम उठाउनुहुनेछ जब तपाई आफैंलाई सोच्नु भएको बुद्धिमानी भावना जस्तै स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्रको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुहुने शरीर, जुन तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ, र साथसाथै होशियार शक्तिको रूपमा इच्छा तपाईंको रगतको माध्यमबाट बढ्दै गएको छ, अझै पनि रक्त छैन। भावना र इच्छाले चार इन्द्रहरूलाई सिंक गर्नु पर्छ। भावना र इच्छा को स्थान र प्रकार्य को एक समझ विश्वास देखि प्रस्थान को छ कि धेरै उमेर को मानवहरु को श्रद्धाहरु को आफु को रूप मा केवल को रूप मा मानन को लागी को कारण को कारण हो। मानव मा भावना र इच्छा को यो समझ संग, भारत को दर्शन अब नयाँ प्रशंसा संग जारी हुन सक्छ।
पूर्वी शिक्षाले यस तथ्यलाई मान्यता दिन्छ कि शरीरमा सचेत आत्मको ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि, इन्द्रियको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्दछ, र गलत भावना र कार्यबाट स्वतन्त्र हुनुपर्दछ जुन आफ्नै भावना र इच्छालाई नियन्त्रण गर्न असफल भएकोले हुन्छ। । तर यसले विश्वव्यापी गलत धारणालाई पार गर्दैन कि भावना भनेको शरीरको इन्द्रिय हो। यसको विपरित, शिक्षकहरूले भने कि स्पर्श वा भावना पाँचौं अर्थ हो; त्यो इच्छा शरीरको पनि हो। र ती दुवै भावना र चाहना शरीरमा प्रकृतिका चीजहरू हुन्। यस परिकल्पना अनुसार यो तर्क गरिएको छ कि पुरुष, वा आत्मा - मूर्त कर्ता, भावना र चाहना - लाई पूर्णरुपले दमन गर्नु पर्छ, र पूर्ण रुपमा नष्ट गर्नुपर्दछ, "मार्नु," इच्छा।
भावना र इच्छाको बारेमा यहाँ देखाइएको प्रकाशको प्रकाशमा, यो प्रतीत हुनेछ कि पूर्व को शिक्षा असंभव सल्लाह दिइन्छ। शरीरमा अविश्वसनीय अमरले आफैले नष्ट गर्न सक्दैन। यदि मानव शरीरको लागि भावना र इच्छा बिना जीवनमा जाने सम्भव थियो भने, शरीर मात्र निर्वाहयोग्य सास-म्यानमोजिम हुनेछ।
उनीहरूको भावना र चाहनाको गलतफहमीको बाहेक भारतीय शिक्षकहरूले त्रिएक स्वयंको ज्ञान वा समझ भएको कुनै प्रमाण दिँदैनन्। अज्ञात कथनमा: "तिमी त्यो हौ", "यो" भन्ने हो कि "तिमी" जसलाई सम्बोधन गरिएको थियो त्यो आत्मानु, पुरूष हो - व्यक्ति स्वयम् मूर्त स्व; र त्यो "त्यो" जुन "तिमी" लाई यसरी चिनिन्छ विश्वव्यापी स्वयं, ब्रह्माण्ड हो। कर्ता र यसको शरीर बीच कुनै भिन्नता छैन; र त्यस्तै विश्वव्यापी ब्राह्मण र विश्वव्यापी प्रकृति बीच भिन्नता गर्न सम्बन्धित विफलता छ। सबै मूर्त व्यक्तिहरूको स्रोत र अन्तको रूपमा ब्रह्माण्डको सिद्धान्तको माध्यमबाट, असंख्य लाखौं कामदारहरूलाई तिनीहरूको वास्तविक आत्मज्ञानको अज्ञानतामा राखिएको छ; र यस बाहेक, विश्वव्यापी ब्राह्मणमा हराउने अपेक्षा गर्न, आकांक्षा गर्न पनि आएका छ जुन कसैको पनि हुन सक्ने बहुमूल्य चीज हो: अर्को व्यक्तिको अमर आत्मामा कसैको वास्तविक पहिचान, आफ्नै व्यक्तित्व महान् आत्म।
यद्यपि यो स्पष्ट छ कि पूर्वी दर्शनले क्यान्सरलाई प्रकृतिसँग जोडिएको छ, र यसको वास्तविक स्वस्थतामा अयोग्य देखिन्छ, यो अयोग्य र सम्भव छैन कि यी शिक्षाहरूले अज्ञानमा कल्पना गरेको हुन सक्छ; कि उनि मान्छे को सत्य देखि राखन को इरादा संग संधै सक्छ, र यति विषय मा। बरु, यो सम्भव छ कि अवस्थित फारमहरू, तथापि पुरातन हुन सक्दछन्, केवल धेरै पुरानो प्रणालीको ठाडो अवशेषहरू जुन एक सभ्यताबाट विनाश र लगभग बिर्सिएका थिए: वास्तवमा एक सिकाउने शिक्षा साँच्चै प्रवर्द्धन भएको छ; कि अमर क्यान्सर भित्रभित्रको भावनात्मक र भावनात्मक रूपमा मान्यता प्राप्त; जसले क्यान्सर आफ्नो वास्तविक स्व ज्ञानको ज्ञान देखाउनुभयो। अवस्थित फारमहरूको सामान्य विशेषताहरू त्यस्तो सम्भावना सुझाव गर्दछ; र कि उमेर को समयमा मूल शिक्षण को रूप मा एक सार्वभौमिक ब्राह्मण र परास्तविक सिद्धांतहरु जुन केहि objectionable को रूप मा अमर भावना र इच्छा संग दूर हुनेछ के सिद्धान्त को मार्ग को रूप मा दिए।
त्यहाँ एउटा यस्तो खजाना छ जुन पूर्ण रूपमा लुकेको छैन: भगवद् गीता, भारतका गहनाहरूमध्ये सबैभन्दा बहुमूल्य। यो मूल्य भन्दा परे भारतको मोती हो। कृष्णले अर्जुनलाई दिएका सत्यहरू उदात्त, सुन्दर र अनन्त छन्। तर टाढाको ऐतिहासिक अवधि जहाँ नाटक सेट गरिएको छ र यसमा समावेश छ, र पुरातन वैदिक सिद्धान्तहरु जसमा यसको सत्यता घुम्छ र कफन गरिएको छ, हामीलाई कृष्ण र अर्जुन चरित्र के हो भनेर बुझ्न गाह्रो बनाउँदछ; ती कसरी एक अर्कामा सम्बन्धित छन्; शरीरको भित्र वा बाहिर प्रत्येकको अफिस के हुन्छ। यी उचित श्रद्धेय लाइनहरूमा शिक्षाको अर्थ पूर्ण छ, र ठूलो मूल्यवान हुन सक्छ। तर यो पुरातात्विक धर्मशास्त्र र धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तहरूसँग यति मिसिएको छ र अस्पष्ट छ कि यसको महत्त्व लगभग पूर्ण रूपमा लुकेको छ, र यसको वास्तविक मूल्य तदनुसार अवमूल्यन छ।
पूर्वी दर्शनमा स्पष्टता को सामान्य अभावको कारण, र यो शरीरमा र आफ्नो वास्तविक स्वयंको ज्ञान को मार्गनिर्देशनको रूपमा स्वयं विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ भन्ने तथ्यलाई देखाउँदै, भारतको प्राचीन शिक्षा शंकास्पद र निर्भर देखिन्छ। । एक पश्चिम मा फर्कन्छ।
ईसाई धर्मको सम्बन्ध: ईसाई धर्मको वास्तविक उत्पत्ति र इतिहास अस्पष्ट छन्। शिक्षाहरू के हो भनेर व्याख्या गर्ने प्रयासको शताब्दीदेखि एक विशाल साहित्यको वृद्धि भयो, वा तिनीहरू मूलतः के उद्देश्य थियो। प्रारम्भिक समयबाट त्यहाँ शिक्षाको धेरै सिकाइरहेको छ; तर कुनै लेखहरू तल आउन सकेनन् कि वास्तवमा के गर्ने उद्देश्यको ज्ञान देखाउँछन् र सुरुमा सिकाइयो।
सुसमाचारका पुस्तकहरूमा दृष्टान्त र भनाइहरूले भव्यता, सरलता र सत्यको प्रमाण दिन्छ। यद्यपि ती व्यक्तिलाई जसलाई नयाँ सन्देश पहिलो दिइएको थियो त्यो यो बुझेको छैन। पुस्तकहरू सिधा छन्, भ्रम गर्नको लागि होइन; तर उही समयमा उनीहरू भन्छन् कि त्यहाँ भित्री अर्थ छ जुन निर्वाचितहरूको लागि हो; एउटा गोप्य शिक्षा सबैको लागि नभई "जसले विश्वास गर्दछ"। निश्चित रूपमा, पुस्तकहरू रहस्यले भरिएका छन्; र यो अनुमान गरिनु पर्छ कि तिनीहरू शिक्षा खोल्न को लागी शुरू गर्न थोरैलाई थाहा थियो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा: यी रहस्यहरू हुन्। रहस्यहरु पनि, पक्का अवधारणा र येशूको जन्म र जीवन हो; त्यसरी नै उसको क्रूसमा मृत्यु, र पुनरुत्थान। रहस्यहरू, निस्सन्देह, स्वर्ग र नरक, र शैतान, र परमेश्वरको राज्य हो; किनभने सायद यो सम्भावना नै छ कि यी विषयहरू प्रतीकको रूपमा नभई इन्द्रियको रूपमा बुझिएको हो। यसबाहेक, पुस्तकहरूमा त्यहाँ वाक्यांश र शव्दहरू छन् जुन स्पष्ट रूपमा धेरै शाब्दिक रूपमा लिनु हुँदैन, बरु रहस्यमय अर्थमा; र अरु स्पष्ट रुपमा चयनित समूहहरु लाई मात्र महत्व हुन सक्छ। यसबाहेक, यो दृष्टान्त र चमत्कारहरू शाब्दिक सत्यको रूपमा सम्बन्धित हुन सक्ने छ भन्ने तर्क गर्नु उचित छैन। रहस्यहरू भरि - तर कहिँ पनि रहस्यहरू प्रकट गरिएका छैनन्। यो सबै रहस्य के हो?
सुसमाचारका पुस्तकहरूको स्पष्ट उद्देश्य भनेको भित्री जीवनको समझ र बाँच्न सिकाउनु हो; एक आन्तरिक जीवन जसले मानव शरीरलाई पुनर्जीवित गर्दछ र यसैले मृत्युमाथि विजय हासिल गर्दछ, भौतिक शरीरलाई अनन्त जीवनमा पुनर्स्थापित गर्दछ, जुन राज्यबाट यसलाई पतन भनिएको छ - यसको "पतन" "मूल पाप" हो। एक समय त्यहाँ पक्कै पनि एउटा निश्चित शिक्षा प्रणाली भएको हुनुपर्छ जसले कुनै त्यस्तो आन्तरिक जीवन कसरी जीउन सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ: कसरी कसैले यस्तो काम गरेर आफ्नो वास्तविक आत्माको ज्ञानमा आउन सक्छ। प्रारम्भिक इसाई लेखोटहरूमा यस गोप्य शिक्षाको अस्तित्वलाई गोप्य र रहस्यको सन्दर्भमा सुझाव दिइन्छ। यस बाहेक यो प्रस्ट छ कि दृष्टान्तहरू दृष्टान्तहरू, उखानहरू: घरेलु कथाहरू र वाणीको आंकडा, केवल नैतिक उदाहरण र नैतिक शिक्षा मात्र नभई केही निश्चित आन्तरिक, अनन्त सत्यलाई निर्देशन प्रणालीको एक भागका रूपमा उपयोग गर्ने वाहनको रूपमा काम गर्दछन्। यद्यपि, सुसमाचारका पुस्तकहरू जुन आज अवस्थित छन्, त्यस्ता कनेक्शनहरूको अभाव छ जुन प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक पर्दछ; के हामी तल आएको छ पर्याप्त छैन। र, रहस्यहरु को बारे मा जहाँ यस्ता शिक्षाहरु लाई कवच लुकाइएको थियो, कुनै ज्ञात कुञ्जी वा कोड हामीलाई दिइएको छैन जसको साथ हामी अनलक गर्न वा व्याख्या गर्न सक्छौं।
हामी जान्दछौं कि प्रारम्भिक सिद्धान्तहरूको सक्षम र सबैभन्दा निश्चित एक्सपोजर हो पावल। उनले प्रयोग गरेका शब्दहरू उनको अर्थ स्पष्ट पार्नको लागि थिए जसलाई उनीहरू सम्बोधन गरिएको थियो; तर अब उनको लेखोट वर्तमान समयको हिसाबले व्याख्या गर्न आवश्यक छ। "कोरिन्थीहरूलाई पावलको पहिलो पत्र", पन्ध्रौं अध्यायले केहि शिक्षालाई संकेत गर्दछ र सम्झाउँदछ; एक आन्तरिक जीवन को बस्ने को बारे मा निश्चित निश्चित निर्देशन। तर यो मान्नुपर्दछ कि ती शिक्षाहरू कि त लेखनको लागि प्रतिबद्ध थिएनन् - जुन बुझिन सक्ने देखिन्छ - वा अन्यथा ती हराएका थिए वा लेखोटबाट बाहिर आएका छन्। सबै घटनाहरूमा, "The Way" देखाइएको छैन।
रहस्यको रूपमा किन सत्यहरू दिइएको थियो? कारण भएको हुन सक्छ कि अवधिको कानुनले नयाँ सिद्धान्त फैलिएको छ। अजीब शिक्षा वा शिक्षाको घिमिरे मृत्युले सजाय दिन सक्दछ। निस्सन्देह, किंवदंती यो हो कि येशूले सत्यको शिक्षा र मार्ग र जीवनको लागि क्रूसमा मृत्यु भएको थियो।
तर आज यो भनिन्छ, त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ: कुनै व्यक्ति मृत्युको डर बिना राज्यको रहस्यको बारेमा के विश्वास गर्न सक्छ भन्ने कुरा बताउन सक्छ। मानव शरीरको गठन र यसमा बसोबास गर्ने सचेत आत्मको बारेमा कसैले पनि के सोच्दछ वा जान्दछ, सत्य र विचारहरु संग आत्मसम्बन्धित आत्म र यसको वास्तविक आत्मबीचको सम्बन्धको बारेमा हुन सक्छ, र ज्ञानको मार्गको सम्बन्धमा - यो आज लुक्नको लागि छैन, रहस्यको शब्दहरूमा तिनीहरूका बुझाइको लागि कुञ्जी वा कोडको आवश्यक पर्दछ। आधुनिक समयमा सबै "स "्केत" र "अन्धा", "सबै" रहस्य "र" दीक्षाहरू ", एक विशेष रहस्य भाषामा, अज्ञानता, अहंकार, वा विकट वाणिज्यवादको प्रमाण हुनुपर्छ।
गल्ती र विभाजन र विस्मरणीयता को बावजूद; यसको रहस्यमय सिद्धान्तहरूको महान विविधता बरु, ईसाई धर्म संसारको सबै भागहरूमा फैलिएको छ। सम्भवतः कुनै अन्य विश्वास भन्दा बढी, यसको शिक्षाहरूले संसार परिवर्तन गर्न मद्दत गरेको छ। त्यहाँ शिक्षाहरूमा सत्य हुनुपर्दछ, तथापि तिनीहरू लुकेको हुनसक्छ, जुन लगभग दुई हजार वर्षसम्म मानव हृदयमा पुगिसकेका छन् र उनीहरूमा मानवतालाई जगाउँछन्।
मानवतामा अनन्त सत्यता मानवतामा मात्र हुन्छन् जुन मानव शरीरमा सबै श्रद्धाहरूको समग्रता हो। यी सत्यहरू सख्त वा पूर्ण रूपमा बिर्सन सक्दैनन्। जुनसुकै उमेरमा, जुनसुकै दर्शन वा विश्वासमा, सत्यहरू देखा पर्छन् र फेरि देखा पर्छन्, जुन तिनीहरूको परिवर्तनका फारमहरू।
यी सत्यहरूको केही कास्ट गरिएको एक फारम फ्रिमासनरी हो। मेसनिक आदेश मानव जाति जत्तिकै पुरानो हो। यसले ठूलो मूल्यको शिक्षा छ; अझ ठूलो, वास्तवमा, मेसनहरू जसले उनीहरूको कस्टोडियनहरू हुन् सराहना गर्छन्। आदेशले अनमोल जानकारीको प्राचीन बिट्स सुरक्षित गरेको छ जो सचेतपूर्वक अमर छ उसको लागि अनन्त शरीरको निर्माणको सम्बन्धमा। यसको केन्द्रीय रहस्य ड्रामा नष्ट भएको मन्दिरको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मन्दिर मानव शरीरको प्रतीक हो जुन मानिसले पुन: निर्माण गर्नुपर्दछ, पुन: उत्पन्न गर्नुपर्दछ, शारीरिक शरीरमा चिरस्थायी र अनन्त हुनेछ। एउटा शरीर जुन तत्कालीन सचेतपूर्वक अमर कर्ताको लागि उपयुक्त बस्न योग्य हुनेछ। "शब्द" जुन "हराएको छ" कर्ता हो, आफ्नो मानव शरीरमा हराएको छ - एक पटक महान् मन्दिरको भग्नावशेष; तर यसले आफैंलाई फेला पार्दछ कि शरीर पुन: उत्पन्न भएको छ र कर्ताले यसको नियन्त्रण लिन्छ।
यस पुस्तकले तपाईंको सोचमा थप प्रकाश र अधिक प्रकाश ल्याउँछ; जीवनको माध्यमबाट तपाइँको "बाटो" फेला पार्न प्रकाश। तर त्यसले ल्याउने ज्योति प्रकृतिको प्रकाश होइन। यो नयाँ प्रकाश हो; नयाँ, किनभने यो तपाईसँग एक उपस्थिति भएता पनि तपाईलाइ थाहा छैन। यी पृष्ठहरूमा यसलाई सचेत प्रकाश भित्र भनिएको छ; यो उज्यालो हो कि तपाई जस्तो चीजहरु तपाईलाई देखाउन सकोस्, खुफियाको प्रकाश जुन तपाईसँग सम्बन्धित छ। यो यो प्रकाशको उपस्थितिको कारण हो कि तपाईं विचारहरू सिर्जना गर्न सोच्न सक्षम हुनुहुन्छ; विचारहरू तपाईंलाई प्रकृतिको वस्तुहरूमा बाँध्न, वा तपाईंलाई प्रकृतिको वस्तुहरूबाट स्वतन्त्र गर्न, तपाईंले छनौट र इच्छा अनुसार। वास्तविक सोच सोचाइको विषयको भित्र चेतना प्रकाशको स्थिर होल्डिंग र फोकसिंग हो। तपाईंको सोचबाट तपाईं आफ्नो गन्तव्य बनाउनुहुन्छ। सही सोच भनेको आफैलाई चिन्ने बाटो हो। त्यो जसले तपाईलाई बाटो देखाउन सक्छ, र जसले तपाइँलाई तपाइँको बाटोमा लैजान सक्छ, बुद्धिमत्ताको प्रकाश हो, भित्र चेतना प्रकाश। पछिका अध्यायहरूमा यो प्रकाश कसरी अधिक प्रकाश पाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ।
किताबले त्यो विचारहरू वास्तविक कुराहरू, वास्तविक प्राणीहरू देखाउँछ भनेर देखाउँछन्। मानिस सृष्टि गर्ने वास्तविक चीजहरू उहाँका विचार हुन्। पुस्तकले मानसिक प्रक्रियाहरूलाई विचार गर्दछ जुन विचारहरू सिर्जना गरिन्छ; र त्यो धेरै विचारहरू शरीर वा दिमाग भन्दा बढि स्थायी छन् जुन तिनीहरू सिर्जना गरीन्छन्। यो थाहा छ कि विचार व्यक्ति विचार गर्दछ क्षमताहरू, नीलो प्रिन्टहरू, डिजाइनहरू, मोडेलहरू जसबाट उहाँले ठोस भौतिक कुराहरू निर्माण गर्नुहुने छ जुन उनले प्रकृतिको अनुहार परिवर्तन गरेका छन् र आफ्नो जीवनको मार्गलाई के भनिन्छ? सभ्यता। विचारहरू विचारहरू वा रूपहरू मध्ये कुन हो र कुन सभ्यताहरू बनाइएका छन् र बनाइएका र नष्ट गरिन्छन्। पुस्तकले मानिसहरूको अदृश्य विचारहरू कार्यहरू र वस्तुहरू र व्यक्तिगत र सामूहिक जीवनका कार्यक्रमहरूको रूपमा व्याख्या कसरी वर्णन गर्दछ, पृथ्वीमा जीवन पछि जीवनको माध्यमबाट आफ्नो भाग्य सिर्जना गर्दछ। तर यो पनि व्यक्तिले विचार सिर्जना नगरी कसरी सोच्न सिक्न सक्छ, र यसैले आफ्नै भाग्य नियन्त्रण गर्न पनि सक्छ।
सामान्यतया प्रयोग गरिएको मनमा सबै समावेशी शब्द हो जुन सबै प्रकारको सोचमा, लागू भइरहेको हुन्छ। यो सामान्यतया मानिएको छ कि मानिस मात्र एक मन हो। वास्तवमा तीन अलग र अलग दिमागहरू, यो, कुकुर लाइटको साथ विचारको लागि तरिका हो, भ्रष्टाचार क्यान्सर द्वारा प्रयोग गरिँदै छ। यी, पहिले उल्लेख गरिएको हो: हो: शरीर-दिमाग, भावनात्मक मन, र इच्छा मन। मन बुद्धिमानी कुराको कार्य हो। यसकारण एक दिमागले ढोकाबाट स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दैन। प्रत्येक तीन दिमागको कार्यले घनिष्ठ भावना र इच्छामा निर्भर गर्दछ।
शरीर-दिमाग भनेको सामान्यतया दिमाग, वा बुद्धि जस्तै बोल्नु हो। यो भौतिक प्रकृति को प्रेमी को रूप मा भावना र इच्छा को कार्य को रूप मा, मानव शरीर मिसिन को ओपरेटर को रूप मा, र यसैले शरीर को दिमाग भनिन्छ। यो एक मात्र दिमाग हो जसको लागि सक्षम छ र त्यो चरणमा र शरीरको इन्द्रमार्फत कार्य गर्दछ। यसैले यो साधन हो कि माध्यमबाट क्यान्सर होशियार हो र भौतिक संसार को मामला मा र भित्र र कार्य गर्न सक्छ।
भावना दिमाग र इच्छा मन दिमाग वा भौतिक संसारको सम्बन्धमा इच्छा र इच्छाको कार्य हो। यी दुई दिमागहरू लगभग पूर्ण रूपमा डूबिएका छन् र शरीर-दिमाग द्वारा नियन्त्रण र नियन्त्रणमा राखिएका छन्। त्यसैले व्यावहारिक रूप देखि सबै मानव सोच शरीर को दिमाग को सोच को अनुरूप बनाइयो, जो प्रकृति को कर्ता संग सम्बन्ध गर्दछ र शरीर को अलग देखि केहि को रूप मा उनको सोच को रोकथाम गर्दछ।
त्यो जुन आज मनोवैज्ञानिक भनिएको छ विज्ञान होइन। आधुनिक मनोविज्ञान मानव व्यवहारको अध्ययनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसको मतलब यो लिन सकिन्छ कि यो वस्तुहरु र प्रकृति को शक्तिहरु जुन मानव तंत्रमा इन्द्रमार्फत बनाइन्छ, र यसप्रकार प्राप्त इंप्रेशन को मानव तंत्र को प्रतिक्रिया को छाप देखि अध्ययन को अध्ययन हो। तर त्यो मनोविज्ञान होइन।
त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको मनोविज्ञान एक विज्ञानको रूपमा हुन सक्दैन, जब सम्म कुनै प्रकारको मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान हो, र मन के हो? र विचार को प्रक्रिया को एक प्राप्ति, दिमाग कार्य कसरि, र यसको कार्य को परिणामहरु र परिणामहरु को। मनोवैज्ञानिकहरूले स्वीकार्छन् कि उनीहरूलाई के थाहा छैन यी कुराहरू के हो। मनोविज्ञान एक साँचो विज्ञान हुन सक्नु अघि त्यहाँको क्यान्सरको तीन मनको अन्तरक्रियात्मक कार्यको बारेमा केहि बुझाइ हुनुपर्छ। यो आधार हो जसमा मन र मानव सम्बन्धको साँचो विज्ञान विकसित गर्न सकिन्छ। यो पृष्ठमा यो देखाइएको छ कि भावना र इच्छा कसरी सिधा यौन सम्बन्धसँग सम्बन्धित छन्, वर्णन गर्नुहोस् कि एक व्यक्तिलाई भावनात्मक पक्षमा इच्छाको आधारमा छ र महिलामा इच्छाको पक्ष महसुस गरिरहेको छ; र कि हरेक मानवमा अहिले सम्म प्रमुख शरीर-दिमागको कार्यले अधिक लगभग एक वा अन्य को लागी अधिकृत गर्दछ, शरीरको सेक्स अनुसार उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। र यो देखाइएको छ, र, सबै मानव सम्बन्ध पुरुष र महिलाहरु को एक-दूसरे को सम्बन्ध मा शरीर को दिमागहरु को काम मा निर्भर हुन्छन्।
आधुनिक मनोवैज्ञानिकहरू आत्मा भन्ने शव्द प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन्, यद्यपि यो धेरै शताब्दीदेखि अ language्ग्रेजी भाषामा सामान्य प्रयोगमा आएको छ। यसको कारण यो छ कि आत्मा के हो वा यसले के गर्छ भन्ने सम्बन्धमा जे भनिएको छ, वा यो सेवा गर्छ भन्ने उद्देश्य, यस विषयको वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्रमाणित गर्न एकदम अस्पष्ट, अति श doubt्कास्पद र भ्रामक छ। यसको सट्टा, मनोवैज्ञानिकहरूले मानव अध्ययन यन्त्र र यसको व्यवहारको अध्ययनको विषयको रूपमा लिएका छन्। यो लामो समयदेखि मानिसहरूले बुझ्दछन र सहमत छ, साधारणतया, त्यो मानिस "शरीर, आत्मा र आत्मा" बाट बनेको हुन्छ। कसैलाई पनि श doubts्का छैन कि शरीर जनावर हो; तर आत्मा र आत्माको बारेमा धेरै अनिश्चितता र अनुमान गरिएको छ। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा यो पुस्तक स्पष्ट छ।
पुस्तकले देखाउँदछ कि जीवित आत्मा वास्तविक र शाब्दिक तथ्य हो। यसले देखाउँदछ कि यसको उद्देश्य र यसको कार्य विश्वव्यापी योजनामा ​​ठूलो महत्त्वको छ, र यो अविनाशी छ। यो वर्णन गरिएको छ कि जसलाई आत्मा भनिएको छ त्यो प्रकृति इकाई हो - एक तत्व, एक तत्वको एकाई; र यो सचेत तर अविवेकी संस्था शरीरको श्रृंगारको क्रममा सबै प्रकृति इकाईहरूको सबैभन्दा टाढा उन्नत हो: यो शरीरको संगठनको वरिष्ठ एलिमेन्टल इकाई हो, असंख्य कम कार्यहरूमा लामो प्रशिक्षुत्व पछि त्यस कार्यमा प्रगति गरेको। प्रकृति समावेश। यसप्रकार सबै प्रकृति कानूनको योग भएकोले, यो एकाई मानव शरीर संयन्त्रमा प्रकृतिको स्वचालित महाप्रबन्धकको रूपमा कार्य गर्न योग्य छ; जस्तो कि यसले अमर कर्तालाई उसको पुन: अस्तित्वका माध्यमबाट समय-समयमा एक कर्ता भित्र पस्नको लागि नयाँ शारीरिक शरीर निर्माण गरेर, र त्यस शरीरको मर्मत र मर्मत गर्दछ जब सम्म कर्ताको भाग्य चाहिन्छ, कर्ताले निर्धारण गरे अनुसार। सोच्दै
यस इकाईमा सास-फारम भनिन्छ। सास-फारमको सक्रिय पक्ष सास हो। सास शरीरको आत्मा, आत्मा हो; यसले सम्पूर्ण ढाँचालाई घटाउँछ। सास-फारमको अर्को पहलू, निष्क्रिय पहलू, रूप वा मोडेल हो, ढाँचा, ढाँचा, अनुसार भौतिक ढाँचा बनाइएको छ, सांसको कार्यले दृश्यात्मक, ठोस अस्तित्वमा बनाइएको छ। यसैले सास-फारमका दुई पक्षहरूले जीवन र ढाँचालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसको संरचनाले अवस्थित छ।
त्यसो भए ती व्यक्तिले शरीर, आत्मा र आत्मामा समावेश गरेको बयान सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि शारीरिक शरीर सकल विषयबाट बनाइएको छ; त्यो आत्मा शरीरको जीवन हो, जीवित सांस, जीवनको सास; र त्यो आत्मा आन्तरिक रूप हो, दृश्यात्मक ढाँचा, अदृश्य ढाँचा; र यसरी जीवित प्राणी सदैव सास-रूप हो जुन शरीरको शरीरमा आकार, कायम राख्ने, मरम्मत र पुनर्निर्माण गर्दछ।
सास-फर्म, यसको प्रकार्यको निश्चित चरणहरूमा, जुन मनोविज्ञानले अवचेतन दिमाग र बेहोश गरेको छ। यसले अपमानजनक तंत्रिका तंत्र को प्रबन्ध गर्दछ। यो काममा यसले प्रकृतिबाट प्राप्त छापहरूको अनुसार कार्य गर्दछ। यसले शरीरको स्वैच्छिक आर्यन पनि गर्दछ, जस्तै डियर-इन-शरीरको सोचले निर्धारित गर्दछ। यसैले यो प्रकृति र अमरस्थ sojourner को बीच एक बफर को रूप मा काम गर्दछ शरीर मा; एक automaton अन्धकार वस्तुहरु को प्रभाव र प्रकृति को बल को प्रतिक्रिया, र क्यान्सर को सोच को जवाब।
तपाईंको शरीर शाब्दिक रूपमा तपाईंको सोचको परिणाम हो। जे होस् यसले स्वास्थ्य वा रोगको प्रदर्शन गर्दछ, तपाइँ यसलाई आफ्नो सोच र भावनाबाट र ईच्छाले बनाउनुहुन्छ। तपाईंको हालको शरीरको शरीर वास्तवमा तपाईंको अविनाशी आत्मा, तपाईंको सास-रूपको अभिव्यक्ति हो; यो यसरी धेरै जीवनकालको विचारहरु को बाह्य छ। यो तपाईको सोच र कार्यहरूको एक दृश्यात्मक रेकर्ड हो वर्तमानमा। यस तथ्यमा शरीरको परिपूर्णता र अमरत्वको कीटाणु निहित छ।
त्यहाँ केहि छैन त्यसैले यति अजीब आजको धारणा हो कि मानिस एक दिन चेतना अनैतिकता पाउन पाउनेछ; कि उसले अन्ततः पूर्णता को स्थिति प्राप्त गर्नेछ जसबाट उसले मूलतः गिर्यो। भिन्न प्रकारका रूपमा यो शिक्षण सामान्यतया पश्चिममा लगभग दुई हजार वर्षको लागि वर्तमानमा रहेको छ। त्यस समयमा यो संसारभरि फैलिएको छ ताकि शताब्दी लाखौं श्रद्धाहरू, शताब्दीको माध्यमबाट पृथ्वीमा पुन: अवस्थित, अवधारणाको साथ अन्ततः सत्यको रूपमा अवधारणामा ल्याइएको छ। यद्यपि यो अझै पनि धेरै कम बुझिन्छ, र यसको बारेमा अझै पनि कम सोच; यद्यपि यो विभिन्न व्यक्तिहरूको भावना र इच्छाहरू पूरा गर्न विकृत भएको छ; र यद्यपि यो उदासीनता, भावीता, या भावनात्मक पक्ष संग आज यो विभिन्न मानिन्छ, यो विचार आज दिन मानवता को सामान्य सोच पैटर्न को भाग हो, र यसैले विचारशील विचार को योग्य छ।
तथापि, यस किताबमा केही बयानहरू अजीब लगाउन सक्दछन्, अझ पनि शानदार, जबसम्म पर्याप्त विचार तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई दिइएको छ। उदाहरणका लागि: मानव भौतिक निकायलाई अव्यवस्थित, अनन्त बनाइने विचार; भक्तपुरको भित्तामा एक अर्काको ज्यान गएको छ। र, त्यसोभए, पूर्णता र अनन्त जीवनको अवस्था भनेको प्राप्त हुनु हो, मृत्यु पछि होइन, पछि केही दूर नबुलुस, तर भौतिक संसारमा एक जना जीवित छ। यो साँच्चै धेरै अजीब लाग्न सक्छ, तर जब बुद्धिमानी को जांच को यो अनुपयुक्त देखिने देखिने छैन।
अयोग्य के हो कि मानिस को भौतिक शरीर मर्नु पर्छ; अझै अझ अपमानजनक यो प्रस्ताव हो कि यो केवल मृत्यु भएको छ कि एक सदाको लागि बाँच्न सक्छ। वैज्ञानिकहरूले विगतमा यसो भनेका छन् कि शरीरको जीवन अनिश्चितकालसम्म विस्तारित हुनु हुँदैन, यद्यपि उनीहरूले कसरी यो पूरा हुन सक्दछन् भनेर सुझाव गर्दैन। निस्सन्देह, मानव निकायहरू सधैं मृत्युको अधीनमा छन्; तर तिनीहरू केवल मर्छन् किनकि तिनीहरूलाई पुनरुत्थान गर्न कुनै उचित प्रयास गरिएको छैन। यस पुस्तकमा, अध्यायमा ग्रेट राउन्ड, यो भनिएको छ कसरी शरीर पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ, पूर्णता को स्थिति मा पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ र पूर्ण ट्र्यून स्व को लागि एक मन्दिर बनाइन्छ।
सेक्स पावर अर्को रहस्य हो जुन मानिसले समाधान गर्नुपर्दछ। यो आशिष हुनु पर्छ। यसको सट्टामा, मानिस अक्सर यसलाई आफ्नो शत्रु बनाउँछ, उसको शैतान, जो सँधै उसको साथ हुन्छ र जसबाट ऊ उम्कन सक्दैन। यस पुस्तकले कसरी यसले सोच्दछ कि यसलाई महान् शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्न कसरी देखाउन सकिन्छ भनेर देखाउँदछ; र कसरी शरीरलाई पुन: उत्पन्न गर्न को लागी बुझ्ने र आत्म-नियन्त्रण द्वारा र एकको लक्ष्य र आदर्शहरू हासिल गर्न को लागी निरन्तर प्रगतिशील डिग्री मा।
प्रत्येक मानव एक दोब्बर रहस्य हो: आफैको रहस्य, र शरीरको रहस्य उहाँ भित्र हुनुहुन्छ। उहाँसँग छ र दोहोरो रहस्यको लागि लक र कुञ्जी हो। शरीर लक हो, र ऊ लकमा साँचो हो। यस पुस्तकको उद्देश्य भनेको तपाईंलाई आफ्नो रहस्यको कुञ्जीको रूपमा आफूलाई कसरी बुझ्ने भनेर भन्नु हो; कसरी शरीरमा आफूलाई भेट्टाउने; कसरी आत्म-ज्ञान को रूप मा तपाइँको वास्तविक आत्म पत्ता लगाउन र जान्न; तपाईंको शरीरमा रहेको लक खोल्न कुञ्जीको रूपमा कसरी आफूलाई प्रयोग गर्ने; र तपाइँको शरीर मार्फत कसरी प्रकृतिको रहस्यहरू बुझ्ने र जान्ने। तपाईं भित्र हुनुहुन्छ, र तपाईं अपरेटर हुनुहुन्छ, प्रकृतिको व्यक्तिगत शरीर मेशिन; यो कार्य गर्दछ र प्रकृतिसँग र सम्बन्धमा। जब तपाईं आफ्नो आत्म ज्ञानको कर्ता र तपाईंको शरीरको मेसिनको अपरेटरको रूपमा आफैलाई रहस्य सुल्झाउनुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा हुनेछ - प्रत्येक विवरण र पूरै रूपमा - तपाईंको शरीरको एकाइहरूको कार्यहरू प्रकृतिको नियम हो। तपाईं तब ज्ञातको रूपमा प्रकृतिको अज्ञात कानूनहरू जान्नुहुनेछ, र महान प्रकृति मेसिनको साथ काम गर्न सक्नुहुनेछ यसको व्यक्तिगत शरीर मेशिनको माध्यमबाट जुन तपाईं हुनुहुन्छ।
अर्को रहस्य समय हो। समय कहिलेकाहीं कुराकानीको सामान्य विषयको रूपमा उपस्थित छ; यद्यपि जब यो यसको बारे सोच्ने प्रयास गर्दछ र भन्नुहोस् कि यो वास्तवमा के हो, यो सार, अपरिचित हुन्छ; यो आयोजित गर्न सकिंदैन, कसैले त्यसलाई बुझ्न असफल हुँदैन; यो eludes, बचान, र एक भन्दा बढी छ। यो के वर्णन गरिएको छैन।
समय एक अर्कोको सम्बन्धमा एकाइहरूको परिवर्तन, वा एकाइहरूको समूह हो। यो साधारण परिभाषा जताततै र प्रत्येक राज्य वा सर्तमा लागू हुन्छ, तर यसलाई सोच्न र यसलाई बुझ्नु अघि यसलाई लागू गर्नुपर्दछ। कर्ताले शरीरमा ब्यूँझनुपर्दा, समय बुझ्नु पर्छ। समय अन्य संसार र राज्यहरूमा फरक देखिन्छ। सचेत काम गर्नेलाई जाग्ने बित्तिकै जस्तो देखिदैन जस्तो कि सपनामा, वा गहिरो निद्रामा, वा शरीर मर्दा, वा मृत्युपछिको अवस्थाको बखत, वा भवन र जन्मको पर्खाइमा हुँदा नयाँ शरीर यो पृथ्वीमा अधिकार हुनेछ। प्रत्येक समय अवधि सँगसँगै "शुरूमा," एक उत्तराधिकार, र अन्त हुन्छ। समय बाल्यावस्थामा क्रल जस्तो देखिन्छ, युवावस्थामा दौडनुहोस्, र शरिरको मृत्यु नभएसम्म निरन्तर बढ्दो गतिमा दौड।
समय परिवर्तनको वेब हो, अनन्तदेखि परिवर्तनशील मानव शरीरमा बुनेको। वेबमा बुनेको तानमा सास-रूप हो। शरीर दिमाग तान, निर्माता वेबको स्पिनर, र "विगत" वा "वर्तमान" वा "भविष्य" भनिन्छ बुर्का को निर्माता, र संचालक हो। सोचले समयको तान बनाउँदछ, सोचले समयको वेबलाई घुमाउँदछ, सोचले समयको पर्दा बुन्ने गर्दछ; र शरीर-दिमागले सोच्दछ।
CONSCIOUSNESS अर्को रहस्य हो, सबै रहस्यहरूको सब भन्दा ठूलो र गहिराइ हो। चेतना शब्द अद्वितीय छ; यो सिकिएको अंग्रेजी शब्द हो; यसको बराबर अन्य भाषाहरूमा देखा पर्दैन। यसको सबै महत्त्वपूर्ण मान र अर्थलाई कदर गरिएको छैन। यो प्रयोगमा देखिने छ जुन शब्द प्रयोग गर्नको लागि बनाइएको हो। यसको दुरुपयोगका केही सामान्य उदाहरणहरू दिन: यो "मेरो चेतना," र "कसैको चेतना" जस्ता अभिव्यक्तिहरूमा सुनिन्छ; र जस्तै पशु चेतना, मानव चेतना, शारीरिक, मानसिक, ब्रह्माण्ड, र अन्य प्रकारको चेतना। र यसलाई सामान्य चेतना, र ठूलो र गहिरो, र उच्च र तल्लो, भित्री र बाहिरी, चेतनाको रूपमा वर्णन गरिएको छ; र पूर्ण र आंशिक चेतना। उल्लेख पनि चेतनाको शुरुआत, र चेतनाको परिवर्तनको बारेमा सुन्न सकिन्छ। एक व्यक्तिले भन्छ कि उनीहरूले अनुभव गरेका वा बढेको, वा विस्तार, वा विस्तार, चेतनाको कारण भनेको सुन्छन्। शव्दको एक धेरै साधारण दुरुपयोग यस्ता वाक्यांशहरूमा छ: चेतना गुमाउनु, चेतना होल्ड गर्न; पुनः प्राप्त गर्न, प्रयोग गर्न, चेतनाको विकास गर्न। र एक सुन्छ, अगाडि, विभिन्न राज्यहरु, र विमानहरु, र डिग्री, र चेतना को शर्तहरु। चेतना यति योग्य, सीमित, वा निर्धारित गर्न धेरै महान छ। यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै यस पुस्तकले वाक्यांश प्रयोग गर्दछ: सचेत हुनु, वा को रूपमा, वा भित्र। वर्णन गर्न: जुनसुकै सचेत छ केही चीजहरूको बारेमा सचेत हुन्छ, वा यो के हो, वा निश्चितमा सचेत छ सचेत हुनुको डिग्री।
ईमानदारी परम, अन्तिम वास्तविकता हो। कुकुर भनेको सबै चीज चेतना हो। सबै रहस्यहरूको रहस्य, यो समझभन्दा बाहिर छ। यसको बिना यो होशियार हुन सक्दैन; कसैले पनि सोच्न सकेन; कुनै जाँदै, कुनै इकाई, कुनै बल, कुनै इकाई छैन, कुनै पनि कार्य गर्न सक्दछ। यद्यपि कुकुरले कुनै प्रकार्य गर्दैन: यसले कुनै पनि तरिकामा कार्य गर्दैन; यो उपस्थित छ, हरेक ठाउँ। र यो यसको उपस्थितिको कारण हो जुन सबै चीजहरू चेतना हो जुन सबै कुरामा होशियार छन्। ईमानदारी एक कारण होइन। यसलाई सार्न सकिँदैन वा प्रयोग गर्न वा कुनै पनि तरिकाद्वारा प्रभावित कुनै पनि तरिकामा। ईमानदारी केहि चीजको परिणाम होइन, न त यो केहि पनि निर्भर गर्दछ। यसले वृद्धि वा घटाउँदैन, विस्तार, विस्तार, अनुबंध, वा परिवर्तन गर्दैन; वा कुनै पनि तरिकामा फरक पर्दछ। यद्यपि अनगिन्ती भनाइमा अनगिन्ती डिग्रीहरू छन्, त्यहाँ कुचलताको कुनै डिग्री छैन: कुनै विमानहरू, कुनै राज्य; कुनै ग्रेड, विभाजन, वा कुनै प्रकारको विविधताहरू; यो सबै ठाँउ हो, र सबै कुरामा, एक प्रमुख प्रकृति इकाईबाट सर्वोच्च खुफियामा। कुकुरसँग कुनै गुणहरू छन्, कुनै गुणहरू, कुनै विशेषताहरू छैनन्; यो अधिकार छैन; यो स्वामित्व हुन सक्दैन। शोक कहिल्यै सुरु भयो; यो बन्द हुन सक्दैन। सचेतना IS
पृथ्वीमा तपाईंको जीवनमा तपाईं अनिश्चित कालको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै व्यक्ति वा हराइरहेको कुराको लागि अपेक्षा गर्दै वा खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईं अस्पष्ट रूपमा महसुस गर्नुहुन्छ कि यदि तपाईं भेट्टाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईं चाहानुहुन्छ, तपाईं सन्तुष्ट, सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। उमेरहरूको धमिलो सम्झनाहरु माथि वृद्धि; ती तपाईंको विस्मृत विगतको वर्तमान भावनाहरू हुन्; तिनीहरू अनुभवको सदा-पिसाई ट्रेडमिल र मानव प्रयासको शून्यता र निरर्थकता को एक आवर्ती विश्व-थकावट बाध्यता। तपाईंले त्यो भावनालाई परिवारसँग, विवाह द्वारा, बालबालिकाहरू, साथीहरू बीचमा सन्तुष्ट पार्न खोज्नु भएको हुन सक्छ; वा, व्यापार मा, धन, साहस, खोज, महिमा, अख्तियार, र शक्ति मा - वा केहि तपाइँको मुटु को अन्य अन्वेक्षित गोप्य द्वारा। तर कुनै पनि इन्द्रियहरूले त्यस्तो चाहनालाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। कारण यो हो कि तपाईं हराउनुभएको छ - सचेततापूर्वक अमर त्रिएक स्वयंको हराएको तर अविभाज्य अंग हो। युग पहिले, तपाईं, भावना र इच्छा को रूप मा, कर्ता भाग, तपाइँको त्रिकोण स्वयं को विचारक र जानकार भागहरु छोड्नुभयो। त्यसोभए तपाईं आफैंमा हराउनुभएको थियो किनभने, तपाईंको त्रिएक स्व को केही समझ बिना, तपाईं आफैले बुझ्न सक्नुहुन्न, तपाईंको चाहना, र तपाईंको हराएको। त्यसकारण तपाईंले कहिलेकाहीं एक्लो महसुस गर्नुभयो। तपाईंले यस संसारमा अक्सर व्यक्तित्वको रूपमा खेल्ने थुप्रै भागहरू बिर्सनुभयो; र तपाईंले वास्तविक सौन्दर्य र शक्ति बिर्सनुभयो जुन तपाईं सचेत हुनुहुन्थ्यो जबकि तपाईंको विचारक र ज्ञातसँग स्थायित्वको क्षेत्रमा। तर तपाई पापीको रूपमा, तपाईको अनुभूति र इच्छाको सन्तुलित मिलनको लागि सिद्ध शरीरको निम्ति चाहानुहुन्छ, ताकि तपाई पुन: आफ्नो विचारक र जानकार पार्टिसँग संग हुनुहुनेछ, त्रिएक सेल्फको रूपमा, स्थायीताको क्षेत्रमा। पुरानो लेखोटहरुमा "त्यो मूल पाप" "" मानिसहरुको पतन "जस्ता वाक्यांशहरुमा त्यो प्रस्थानको संकेत भएको छ, जसमा एउटा राज्य र राज्यमा संतुष्ट छ। तपाईंले छोड्नु भएको अवस्था र राज्य हुन रोकिदैन; यो जीवितहरूले फेरि प्राप्त गर्न सक्दछ, तर मरेकाहरू मार्फत होइन।
तपाई एक्लै महसुस गर्नुपर्दैन। तपाईंको विचारक र ज्ञात तिम्रो साथ हो। सागर वा वनमा, माउन्ट वा सादामा, सूर्यको उज्यालो वा छायामा, भीड वा एकान्तमा; जहाँ पनि तिमी हो, तपाई साँच्चै सोच्नु हुन्छ र आफैलाई थाहा छ तिम्रो साथ। तपाईंको वास्तविक आत्म तपाईंलाई सुरक्षित राख्नेछ, जबसम्म तपाईं आफैं सुरक्षित गर्न अनुमति दिनुहुनेछ। तपाईंको विचारक र ज्ञात तपाईंको फिर्तीको लागि सधैं तयार छ, तर लामो समय सम्म यो बाटो पत्ता लगाउन र पछ्याउन र फेरि फेरि सजिलै संग ती ट्र्युन स्वको रूपमा घर मा बन्न सक्छ।
बीचमा तपाईं हुनुहुन्न, तपाईं आत्म-ज्ञान भन्दा कम केहि पनि सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्न। तपाईं, भावना र इच्छाको रूपमा, तपाईंको ट्र्युन आफैको जिम्मेवार कर्ता हुनुहुन्छ; र तपाईंले आफ्नो भाग्यको रूपमा के गर्नुभएको छ भने तपाईले दुई महान सबकहरू सिक्नु भएको छ जुन जीवनका सबै अनुभवहरू सिकाउन सकिन्छ। यी पाठहरू हुन्:
तपाईले यी पाठहरू आफूले चाहे जति धेरैको लागि राख्नुहोस्, वा तिनीहरूलाई जति सक्दो चाँडो सिक्न सक्नुहुन्छ - त्यो तपाईंको निर्णयको लागि हो; तर समयको क्रममा तपाईंले तिनीहरूलाई सिक्नुहुनेछ।
सोच र भाग्य ➔